Football Khabar » लिभरपुलको ‘अपराजित यात्रा’ टुंग्याउने दाउमा उल्भ्स : दोहोरिएला सिटीसँगको कथा ?
लिभरपुलको ‘अपराजित यात्रा’ टुंग्याउने दाउमा उल्भ्स : दोहोरिएला सिटीसँगको कथा ?
इंग्लिस प्रिमियर लिग फुटबल प्रतियोगितामा आज केही रोमाञ्चक खेलहरू हुँदैछन् । जसमा लिग लिडर लिभरपुल र उल्भ्सको खेल आज धेरैका लागि प्रतीक्षाको खेल बनेको छ । यो खेल लिभरपुल र उल्भ्स दुवैका लागि उत्तिकै चुनौतीपूर्ण हुनेछ ।
उल्भ्स त्यही टिम हो, जसले यो सिजन लिगका दुवै खेलमा साबिक विजेता म्याचनेस्टर सिटीलाई नमिठो गरी हराएको छ । दुई दिनअघि मात्रै उल्भ्सले आफ्नो घरमा सिटीलाई ३–२ को सनसनीपूर्ण हार चखाउँदा सिटीको उपाधि होड करिब–करिब सकिएको छ । त्यसअघि सिजनको पहिलो भेटमा उल्भ्सले सिटीलाई उसकै घरमा ०–२ ले स्तब्ध बनाएको थियो ।
आज लिभरपुलको घरमा उत्रिँदा उल्भ्स यो सिजन सिटीसँग गरेकै जस्तो काम गर्न चाहन्छ । अर्थात्, ऊ लिभरपुलसँग पनि सिटीसँगकै जस्तो कथा दोहोराउने दाउमा छ । आज लिभरपुलको घरमा उत्रिँदा उल्भ्ससँग भरपुर जोश र ऊर्जा मात्रै हुनेछैन, लिग लिडरलाई यो सिजनको पहिलो हार चखाउने र आफू टप–४ मा उक्लिने दाउ पनि हुनेछ ।
आजको खेलमा उल्भ्सभन्दा बढी लिभरपुल बढी दबाबमा हुनेछ । किनभने, लिगकै उपाधि दाबेदर टिम सिटीलाई दुवै लेगमा हराएको टिमले आफूलाई कडा टक्कर दिनेमा लिभरपुल सचेत छ । यता, लिभरपुलले अघिल्लो खेलमा लिगको दोस्रो स्थानको लेस्टर सिटीलाई ४–० ले हराएकाले ऊ पनि बलियो मनोबलमा छ ।
हाल लिभरपुल १८ खेलपछि ५२ अंक जोडेर लिगको शीर्ष स्थानमा छ । दोस्रो स्थानमा ४२ अंकसहित लेस्टर सिटी छ भने ३८ अंक भएको म्यानचेस्टर सिटी तेस्रोमा छ । आज लिभरपुलविरुद्ध उत्रिन लागेको उल्भस ३० अंकसहित सातौं स्थानमा छ । आज लिभरपुलाई हराए उल्भ्स लिगको चौथो स्थानमा उक्लिनेछ ।
खेल नेपाली समयअनुसार राति १०ः१५ बजेदेखि लिभरपुलको घरेलु मैदान एनफिल्डमा सुरु हुनेछ । आजै राति ११ः४५ बजेबाट म्यानचेस्टर सिटी र सेफ युनाइटेडको खेल पनि हुनेछ ।
प्रकाशित मिति १३ पुष २०७६, आईतवार १६:२९